लण्ड्री प्रेम – मझेरी डट कम
“यु क्यान चुज एनी डे एक्सेप्ट सण्डे एण्ड स्याटर डे…।”
त्यसको कारण किन होला भन्ने आश्चर्यले उसले मुख्तार खाँलाई हेरेको थियो। उसको हेराइको आशय बुझेर मुख्तार खाँले भनेको थियो, “सण्डे र स्याटर डे म स्टेसन आउन पाउन्न, एन्जल्स पनि यी दुवै दिन बिदा लिन्छ, पहिल्यैदेखि ऊ यस्तै गर्दै आएको छ… मलाई सण्डे र स्याटर डे समेत कभर गर्ने मान्छे चाहिएको हो, त्यसकारण मकहाँ काम गर्ने भए बिदा लिने दिन अरू बार रोज… अण्डरस्ट्याण्ड ह्वाट आई मिन?”
मालिक मुख्तार खाँले यसरी क्लियर कुरा गरेपछि उसले भनेको थियो, “देन ट्युज्डे…।”
“के, नो प्रोब्लेम…।”
वास्तवमा ऊ शुरुमा अमेरिका आउँदा थालेको इण्डियनको रेस्टुरेन्टको काम छाडेर अन्त अर्कै नयाँ किसिमको काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खोजीमा थियो। मुख्तार पनि आफ्नो ग्यासस्टेसनमा काममा दलाउन सकिने मान्छे खोजिरहेको थियोे। यही संयोगमा उसले मुख्तारको ग्यासस्टेसनमा काम र मुख्तारले दलाउन सकिने मान्छे ऊ पाएको थियो। त्यसकारण विगत चार वर्षदेखि ऊ मुख्तार खाँको हाइवे नाइन्टी वनको त्यही स्टेसनमा दैनिक एघार घण्टाको दरले दलिइरहेको थियो। उसको हातमा आफ्नो निजी काम गर्न सातामा सिर्फ एक दिन पर्थ्यो। त्यै दिन ऊ अबेलासम्म सुत्ने, लुगा धुने, साताभरका लागि लन्च, डिनरका बट्टा बनाएर फ्रिजमा राख्ने, इमेलहरूको उत्तर दिने, फेसबुकमा प्रकट हुने मित्रहरूका कुरामा कमेन्ट गर्ने, आइपोडमा नयाँ गीत र भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने, हप्ता दिनभरि थुप्रिएका अखबारहरू पल्टाउने, साँझ् रेडबुल वा टनिक वाटर मिसाएर बरबन ह्विस्की पिउने र अन्तमा दुई क्यान बियर थपेर छ्यानमा डङरङ्ग पल्टने गर्थ्यो। यसरी ऊ मङ्गलबार झन बढी व्यस्त हुन्थ्यो। त्यस दिन गरिएका आफ्ना चाहका सब कुराहरू उसलाई अपुरा, अधुरा लाग्न थाल्थे। त्यसैले ऊ अर्को मङ्गलबार आजको जस्तो चटारो नगरी आनन्दले बिताउँछु भन्ने सोच्दै ह्विस्की र बियरले लटि्ठएर बेहोसी निद्रामा डुब्थ्यो।
लुगा धुने मेसिन र सुकाउने ड्रायरले लिने बीचको पचहत्तर मिनेट उसलाई सारै पट्यारलाग्दो हुन्थ्यो। ऊ लण्ड्रीमा आउने अरू मानिस किताब, अखबार पढिरहेका देख्थ्यो। तर, ऊ ती झैं पुस्तक वा अखबारमा धेरैबेर घोत्लिरहन सक्दैनथ्यो। शुरु शुरुमा ऊ लण्ड्रीब्यागभित्र आफ्ना मैला लुगासँगै कुनै किताब वा अखबार लिएर जान्थ्यो र, वासिङमेसिनमा लुगा धुन हुलेपछि बेञ्चमा बसेर त्यही किताब वा अखबार, जे लगेको छ त्यसमा घोरिन शुरु गर्थ्यो। तर, पाँच मिनेट मात्र। त्योभन्दा बढी ऊ तिनमा एकाग्र हुन सक्दैनथ्यो। उसको मन र आँखा अन्तै डुल्न थाल्थे। त्यसैले ऊ कहिले बाहिर निस्केर फूटपाथमा टहलिन्थ्यो त कहिले मेसिन र अरू मान्छेको गतिविधिमा घोरिन्थ्यो।
तर, उज्ज्वलासँग भेट हुन थालेपछि उसलाई ती समय फुत्तै म्याराथुनको गतिमा बितेको भान हुन्थ्यो। लण्ड्रीको सब काम सिध्याएर पनि ऊ उज्ज्वलासँग लण्ड्रीभित्रै थप एक-डेढ घण्टा तरङ्गित हुँदै बिताउँथ्यो। र, उज्ज्वला पनि त्यही तरङ्गमा ऊसँग समय बिताउँथी। ऊ उज्ज्वलाका कपडा वासिङमेसिनमा हाल्नेदेखि धोइएका लुगा वासिङमेसिनबाट ड्रायरमा हुल्न, ड्रायरबाट सुकेका लुगा झिकेर टेबुलमा राख्न र पट्याउन सघाउँथ्यो। उज्ज्वला पनि उसलाई उसका कपडा वासिङमेसिनमा राख्न, त्यसबाट झिकेर ड्रायरमा राख्न र ड्रायरबाट झिकेर टेबुलमा राख्दै पट्याएर लण्ड्रीब्यागमा राख्न सघाउँथी।
उज्ज्वलासँग उसको चिनजान भएको धेरै दिन भएको थिएन, सात महिना मात्र भएको थियो। अझ आलिङ्गनसम्मको सम्बन्ध हुन थालेको चार महिना मात्र भएको थियो। पछिल्लो दुई महिनाको चरणमा उनीहरूले परस्पर ठ पनि जोड्न थालेका थिए। लण्ड्रीभित्र उनीहरू जस्तै अरू कुइरे जोडी र भारतीय जोडी पनि यस्तो कर्ममा लिप्त हुन्थे। तिनीहरूको देखादेखीमा पछिपछि उनीहरूले पनि ठ जोड्न थालेका थिए। शुरुमा उनीहरूलाई यो काम गर्न अप्ठेरो लाग्थ्यो, त्यसकारण उनीहरू आफूभित्रको चाहको वेग रोक्दै प्रेमालाप मात्र गर्थे।
सात महिनाअगाडि कुनै एक मङ्गलबार पहिलो पटक उज्ज्वलालाई उसले व्याग बोक्दै लण्ड्रीभित्र पसेको देखेको थियो। उज्ज्वला भित्र छिरेपछि उसको ध्यान उज्ज्वलाको आकर्षक शारीरिक नक्सा र अनुहारको चमक पछि लागेको थियो। उसका दृष्टिहरू उज्ज्वलासँगै चलायमान भएका थिए। ऊ लण्ड्रीको एउटा खाली वासिङमेसिनमा उज्ज्वलाले लुगाहरू हालेको, त्यसमा बिर्कोले नाप्दै लेदो साबुन झरेको र मेसिन अन गरेर कपाल सम्याउँदै अर्को बेञ्चमा बस्न गएको हेरिरहेको थियो। त्यसैवेला पल्लो कुनातिर एउटी बूढी कुइरिनी पनि लुगाहरू ड्रायरमा हालेर कोरम्यान म्याकर्थीको उपन्यास रोड पढ्दै थिई। केही अगाडि उसको ध्यान त्यै फुलेकी बूढीले पढिरहेको म्याकर्थीको उपन्यासको आवरणमा पुगेको थियो। तर, अहिले उसलाई लण्ड्रीमा आफू र उज्ज्वलाबाहेक अरू कोही छैन जस्तो भएको थियो।
वासिङमेसिनले धोइसकेका लुगा ड्रायरभित्र हुलेर त्यसको खुत्रुकेमा एघार वटा क्वाटर (सुका) हालेर अन गरेपछि उज्ज्वला बेञ्चमा बसेकी थिई। उसले पनि लुगा व्यागमा हालिसकेको थियो। उसलाई अझै उज्ज्वलालाई घुरेर हेर्न मन भएकाले ऊ अलमलिँदै लण्ड्रीव्यागको डोरीमा परेको गाँठो फुकाउने बहानामा उभिइरहेको थियो। त्यै वेला उज्ज्वलाले उसलाई सोधी, “दाइ नेपाली हो?”
भित्रभित्र चहकिँदै उसले भन्यो, “हो…।”
उसले लण्ड्रीव्यागको गाँठोसँग खेल्न छोडेर उज्ज्वलालाई सोध्यो, “यो लण्ड्रीमा मैले तपाईंलाई देखेको थिइनँ, अरू बार आउनुहुन्थ्यो कि?”
“हैन, आजै मात्र आएकी, पहिले म यता बस्दिनथेँ … भर्खर एक हप्ता भयो सरेको …।”
“ए! काँ बस्नुहुन्थ्यो त?”
“आज मेरो डे अफ हो, त्यसैले लण्ड्रीमा आएको …।”
उज्ज्वलाले ड्रायरबाट लुगा झिकेर पट्याउन्जेल ऊ कुरिरहे झैं लण्ड्रीभित्रै थियो। त्यसपछि दुवै जना आ-आफ्नो लण्ड्रीव्यागका साथ सँगै बाहिर निस्केका थिए। त्यसपछि उज्ज्वला दक्षिण लागेकी थिई भने ऊ उत्तर।
दोस्रो मङ्गलबारको भेटमा उनीहरू अझ बढी खुलेका थिए। त्यसपछिको तेस्रो, चौथो, पाँचौं भेटसम्ममा आत्मा मिलाउने वार्ता थालिसकेका थिए। एकले अर्काको लुगा पट्याइदिने, वासिङमेसिन र ड्रायरमा राखिदिने, धुने र सुक्ने समयभर बेञ्चमा टाँसिएर गफिन थालेका थिए। कुनैवेला एकाध घण्टा बिताउन लुगा ड्रायरमा राखेर बाहिरको कफीशपतिर पनि जान्थे। त्यसपछि एघारौं, बाह्रौं मङ्गलबारसम्ममा त उनीहरूको प्रेमले त्यसरी आलिङ्गन र चुम्बनको मुद्रा धारण गर्न थालिसकेको थियो।
“पित्तथैलीमा पत्थरी रेछ, डाक्टरले अपरेसनको लागि माघ अठारको समय दिएको छ …।”
बाउसँग भएको त्यो ढाँट कुरो उसले उज्ज्वलालाई पनि सुनाएको थियो। र, प्रेमालापको त्यै गतिको मुद्रामा उसले उज्ज्वलालाई भनेको थियो, “दुई-चार जना साथीभाइलाई बेलमोन्टको सत्यनारायण मन्दिरमा डाकौं र…।”
त्यसपछिको मङ्गलबारको लण्ड्री भेटमा उसले फेरि उज्ज्वलालाई त्यै कुरो गम्भीरतासाथ भनेको थियो, “माघको कुनै हप्ताको उपयुक्त दिन अफ लिएर जाऊँ मन्दिर, म चार-पाँच जना साथीहरू डाक्छु, तिमी पनि डाक्नु… सिन्दूर हाल्ने औपचारिकता पूरा गरौं…।”
यसको जवाफमा पनि उज्ज्वलाले ठ दिन खोज्दै थिई। तर, ऊ ती ठबाट टाढै बस्यो। आफ्ना विफल ठ लिएर उज्ज्वला बेञ्चबाट उठी र वासिङमेसिनभित्रका धोइसकिएका आफ्ना लुगाहरू झिकेर ड्रायरमा राख्न थाली। त्यस दिन उज्ज्वलाले उसको कुरो ड्रायरमै भुटी।
“के भन्ने, हामी दुवै यहाँ इल्लिगल बसेका छौं …।”
“के तैपनि? … बिहे गरेपछि झन हामीलाई धेरै किसिमले सजिलो हुन्छ… बिहे गर्ने भनेर न तिमीले नफर्किने गरी अमेरिका छोडेर नेपाल जानुपर्छ, न मैले। बिहेपछि हामी इल्लिगल भए पनि चाहुन्जेल बस्न पाउने छौं, त्यसमाथि हाम्रा जन्मिने सन्तान लेगल हुनेछन् …।”
“हो! तिमीले त सन्तानसम्मको कुरा सोचिसक्यौ …।”
“हेर, हामी दुईमध्ये एउटाको पनि ग्रीनकार्ड भएको भए कत्ति राम्रो हुन्थ्यो…।”
“त्यो नभएर के भो त? हाम्रो प्रेम त राम्रो छ …!”
“हाम्रो स्टाटस पनि राम्रो होस् भन्ने सोचेको हो मैले …।”
“त्यै त भन्दैछु। एउटा इण्डियन अमेरिकी नागरिक भेटेकी छु, त्यो म काम गर्ने पिजाशपमा आइरहन्छ …।”
“त्यो मसँग बिहे गर्न चाहन्छ, त्यसले मसँग बिहे गर्‍यो भने म सजिलै ग्रीनकार्ड पाउँछु। त्यसकारण आजकल म त्यसलाई पगाल्दैछु, त्यो पनि मसँग भेट्न हरेक साँझ् पिजाशपमा आउँछ… वास्तवमा म अमेरिकामा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित पार्न चाहन्छु…।”
उज्ज्वला अरू थपथाप यस्तै बोल्दै थिई। ऊ चुपचाप ड्रायरबाट हात डाम्ने आफ्ना ताता लुगा फटाफट झिकेर लण्ड्रीव्यागभित्र कोच्न थाल्यो। एकाएक घृणा लाग्न थालेको उज्ज्वलाको अनुहारतिर बिल्कुल नफर्की ऊ तातो लण्ड्रीव्याग बोकेर बाहिर निस्क्यो।
हिमाल खबरपत्रिका पूर्णांक २७३